Leger Metrics: Izwi reMutengi (VoC) Inogoneka Kuzivisa | Martech Zone
Leger Metrics: Izwi reMutengi (VoC) Inogoneka Kuzivisa
Muvhuro, March 31, 2014 Douglas Karr
Leger Metrics inopa chikuva chekubatsira kambani yako mukunzwisisa zviri nani mashandisiro anoita ruzivo rwevatengi kugutsikana, kuvimbika uye purofiti kukambani yako.
Izwi reVatengi (VoC) chikuva rinokupa iwe maturusi akakosha kutora mhinduro yevatengi nezvinhu zvinotevera.
Customer Feedback - Koka mhinduro yemutengi uye uiunganidze kuburikidza nharembozha, webhu, SMS, uye runhare.
Kubika uye Analytics - Dzorera zvimiro kune vanhu chaivo, panguva yakakodzera mune fomati yavanogona kuteedzera. Kunzwisisa mhinduro dzemutengi kunobatsira iwe kukoshesa zviito uye kugadzirisa mashandiro uye ezasi mutsetse mashandiro.
Kwevatengi Kudzoreredza - Win kumashure vasina kugutsikana vatengi vane chaiyo-nguva, zvakakonzera kunyevera. Chengetedza nekugadzirisa nyaya dzavo, tevera nyaya dzavo, uye uvashandure kuva vanofarira mazita emamishinari.
Kutsigira Kwemagariro - Chinja mhinduro yakanaka ive yekukurudzira vezvenhau nekukurudzira kurudziro yemhando. Simbisa yako yemagariro midhiya ROI, wedzera yakanaka izwi-remuromo, gadzira nyowani yekushambadzira mikana, uye wedzera mari.
Chinyorwa Kuongorora - Dudzira zvimwe pamusoro pezviitiko zvevatengi vako uye nemanzwiro nekuongorora yavo yakavhurika mhinduro nekukurumidza uye nyore kuburikidza neRuzivo rweMutauro Kugadziriswa.
Kupera-kusvika-Magumo masevhisi - Leger Metrics inoshanda newe kugadzira, kumisikidza, kuendesa, uye kugadzirisa rako rakabudirira Izwi reVatengi (VoC) mhinduro chirongwa. Enda zvakadzika nekufambira mberi analytics uye zvekushambadzira zvekutsvaga.
Tags: mutengi analyticsmhinduro yemutengimutengi kuporamutengi achishumaleger metrickugadzirisa mutauro mutauronlpkukurudzira munharaundazvinyorwa analyticsinzwiizwi remutengi
Kushambadzira kuCross-Platform Vateereri